Ny fototry ny marketing tsara sy ratsy | Martech Zone
Ny fototry ny marketing tsara sy ratsy
Talata, Novambra 11, 2014 Talata, Novambra 11, 2014 Douglas Karr
Toa ny fahendrena dia iray amin'ireo zavatra tsy ianarana, miaraka amin'ny fanaintainana, fifaliana ary traikefa hafa. Rehefa mihalehibe eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha aho dia hitako fa arakaraka ny habetsaky ny fotoana laniko hametrahana ny andrasana dia ny mpanjifa no tsaratsara kokoa na ratsy kokoa. Raha miteny aho fa hahazo zavatra vita ary maharitra ela kokoa noho ny noeritreretiko - miteraka fahasosorana ilay fanantenana tsy tratra. Raha miteny aho fa hahazo zavatra vita ary manome ilay tetikasa ho fanampin'ny asa sarobidy hafa - nihoatra ny fanantenana aho ary faly ny mpanjifa.
Mbola tsy lavo imbetsaka aho, fa ny fototry ny fahombiazako amin'ny asa aman-draharaha dia mifanitsy akaiky amin'ireo antenaina napetrako. Tsy mino aho fa epifaniôna izany - saingy mino aho fa io no fototry ny marketing tsara sy ratsy amin'ny orinasa an-tserasera. Ny fametrahana ny andrasana dia tsy misy tombana be loatra. Mampiasà tranga, fandinihana tranga, statistika, famoahana gazety, lahatsoratra, fanavaozana… izay rehetra ataontsika dia matetika momba ny scenario tsara indrindra, tsy momba ny zava-misy marina.
Nandeha nankany Florida aho tamin'ity herinandro ity mba hitsena ny zanak'anabaviko avy tany am-piasana voalohany tany amin'ny Golfa. Nandeha nidina niaraka tamin'ny alikako aho, ka dia nijanona be izahay. Tao amin'ny faritra fialan-tsasatra iray tany Florida, nahitako an'io famantarana mampihomehy io teo amin'ny urinaly.
Ny olana amin'ny famantarana, mazava ho azy, dia na dia mivarotra ny automatisation urinal aza izy, amin'ny vodin-tsaina toa ahy, dia manome hafatra ara-barotra hafa tanteraka, tsy azo tratrarina. Mazava ho azy fa tsy maimaim-poana ilay fandidiana… izay hahagaga nefa mety tsy ara-dalàna.
Tokony hitandrina isika amin'ny fanantenana ara-barotra napetraka. Na dia tanjontsika aza ny hampita ny fandrosoana sy ny fampiasam-bola ataontsika, dia tsy voatery hampita hafatra mitovy amin'ny mpihaino antsika izany.
Ny fametrahana ny fanantenana marina sy azo trandrahana amin'ny ezaky ny varotrao dia hanampy anao hamantatra sy hanidy ny mpanjifa mety, hitarika fitomboan'ny fitazonana sy sandan'ny mpanjifa bebe kokoa. Ny fametrahana fanantenana tsy ampoizina dia tsy hitarika ho amin'ny tahan'ny fanoherana avo lenta, fa mety handiso ny hevitra ratsy sy ny resaka ara-tsosialy amin'ny Internet. Izy io indray dia afaka mandroaka orinasa izay mety ho mpanjifa tsara.
Ny fototry ny marketing rehetra dia mametraka fanantenana lehibe. Ny varotra tsara dia mitarika fifandraisana amin'ny mpanjifa mahafinaritra, izay mitarika amin'ny fananganana laza malaza an-tserasera… izay mitarika mpanjifa tsara kokoa.
Tags: andrasan'nymampihomehy-tanana maimaim-poana
Manamboara CTA ary zarao toy ny Banner Ads amin'ny Bannersnack
Fitaovana 5 hanatsara ny vokatrao amin'ny fanaovana bilaogy
13 Nov 2014 amin'ny 3:38 maraina
Ny teboka rehetra nosoratanao dia mety toy ny orana.
Ny fametrahana ny zavatra antenaina fa tsy ny cased tsara indrindra dia mifantoka kokoa amin'ny valiny. Ny varotra tsara sy ratsy dia ny lalao andrasana rehetra.
Ary tsy maintsy lazaiko fa ny ohatra nomenao dia mitsoka fotsiny… .LOL
21 Nov 2014 amin'ny 9:24 maraina
Lahatsoratra tsara - Nanitatra an'ity lohahevitra ity tamin'ny bilaogiko farany aho. Tena hajaina aho raha mijery azy ary manome valiny ahy? https://www.linkedin.com/pulse/article/20141121125524-103311141-are-marketers-living-up-to-customer-expectations-this-christmas
Na izany na tsy izany, tohizo fa tsara!